Spotify Qiima dhimista Ardayda (2020) - Sida loo Codsado Tilmaamaha - Madadaalo
Sidee Loo Helaa Qiime Dhimista Ardayda?
Spotify waa adeegga qulqulka muusikada ugu weyn adduunka. Malaayiin qof ayaa u isticmaalaya baahidooda baahinta. Waxaa jira malaayiin farshaxanno ah oo ka socda meel kasta oo ka mid ah madasha. Ardaydu waa mid ka mid ah dhagaystayaasha bartilmaameedka ugu badan ee codsigan. Ganacsigu wuxuu isku dayayaa inuu bulshada ku celiyo, sidoo kale. Arday ahaan, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad ka faa'iideysato heshiiskan ardayda ee cajiibka ah.
Maalgashigaaga guud wuxuu noqonayaa mid aad ugayar. Tilmaamahan, waxaan ku dabooli doonnaa dhinacyada kala duwan ee dhimista ardayga. Waxaan rajeyneynaa inaan ka jawaabno dhammaan su'aalahaaga oo aan nadiifino wixii shaki ah.
Waxyaabaha Kale ee Ardeydu Bixiyaan ee Aad Hubiso
Qiime Dhimista YouTube Ardayga
Qiimo Dhimista Ardayga
Talaabooyinka aad iskaga diiwaangelinayso Qiime dhimista Ardayga Spotify:
Nidaamka isdiiwaangelintu waa u fudud yahay qof walba. Qof kasta ayaa ku biiri kara barnaamijka kana faa'iideysan kara dalabkan. Waxaa loo heli karaa ardayda haysta aqoonsi koleej ama jaamacad oo ansax ah. Gobollada qaarkood, isticmaalayaasha sidoo kale waxay u baahan yihiin inay lahaadaan cinwaanka emaylka .edu. Haddii aad buuxiso shuruudaha kor ku xusan, ka dib markaa isla markiiba bilow nidaamka is-qoritaanka. Waa tan hageheena si aan kuu caawino. Raac tallaabooyinka adduunyada gabi ahaanba cusub ee qulqulka muusikada.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad booqato bogga 'Spotify'. Waad awoodaa halkan guji oo fiiri madal. Waxay ku geyn doontaa bogga Spotify. Waxaa jira dhammaan faahfaahinta qorshooyinka iyo dalabyada websaydhkan. Dhagsii badhanka caymiska ee midigta kore ee bogga.
Websaydhka 'Spotify premium' wuxuu ku siinayaa faahfaahin ku saabsan rukhsadaha kala duwan ee la heli karo. Isticmaalayaashu waxay ka faa'iideysan karaan dhimista ardayga halkan. Hoos u rog si aad u hesho qorshaha ugu raqiisan oo leh tan oo waxtar dheeraad ah. Guji badhanka bilowga si aad u bilowdo sameynta koontadaada cusub.
Isticmaalayaasha cusub iyo kuwii hore labaduba waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ka faa'iidaystaan ​​sicir-dhimistan. Haddii aad horey u laheyd koonto, ka dib ku gal aqoonsigaaga aqoonsiga. Shabakada Spotify ayaa sidoo kale fursad u leh inay ka gasho Facebook iyo Apple ID. Isticmaale ahaan cusub, waxaad gujin kartaa batoonka 'iska qor Spotify' ee laga heli karo xagga hoose.
Bogga saxiixa wuxuu ku weydiin doonaa xoogaa macluumaad shakhsiyeed oo lagama maarmaan ah. Waad iska diiwaan gelin kartaa Facebook si aad howsha usocoto. Waxaa ka mid ah sameynta koontadaada cusub oo leh emayl iyo erey sir ah. Isticmaalayaasha sidoo kale waa inay ku daraan taariikhdooda dhalasho, magac, iwm. Xalliyaan captcha oo dhagsii badhanka saxiixa. Waxay isla markiiba samayn doontaa koontadaada cusub.
Nidaamka xaqiijinta ee saddexda tallaabo ah wuxuu kaa doonayaa inaad gasho aqoonsiga emailka kulliyaddaada. Waxay isla markiiba hubin doontaa diiwaangelintaada waxayna kuu xaqiijin doontaa dhimista ardayga. Waxaad isla markiiba ka faa'iideysan kartaa dalabka iyadoon dib u dhac ku imaanin xaqiijinta. Waxay ku habboon tahay dhammaan kulliyadaha Mareykanka. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay galaan magacooda, jaamacadooda iyo taariikhda dhalashadooda. Dhagsii badhanka lacag bixinta si aad usocoto.
Talaabada ugu dambeysa ee howsha waa inaad ku darto macluumaadkaaga lacag bixinta. Isticmaalayaasha waxay ku bixin karaan iyagoo isticmaalaya kaarka deynta ee bogga internetka. Waxaa ilaalinaya Asturnaanta si loo hubiyo inaad yeelan karto macaamil ganacsi aamin ah.
Voila! Waxaad si guul leh u iibsatay Discount Student Discount. Waxaan rajeyneynaa inaad waqti fiican kuheli doontid adeeggan. Waa waajib ku ah madaxa muusikada ee jaamacadda.
Astaamaha Spotify Premium:
Noocyada qorshooyinka dhimista ardayda Spotify way kala duwan yihiin hadba gobolkaaga. Waxaad ku arki kartaa waxtarka naftaada marka aad iibsato. Waa kuwan faa'iidooyinka samaynta iibsigan.
1. Durdurro xayeysiis ah oo aan xadidneyn iyo soo degsiimo
Spotify dadka isticmaala caymiska ayaa badbaadin kara muusikadooda si ay u dhagaystaan ​​socdaalka. Dhamaanteen waan maqalnay xayeysiisyada 'Spotify' ee xanaaqa badan. Hadda waxaad kaga fogaan kartaa iyaga maalgashi yar. Dhammaan durdurrada xayeysiiska ah waxay ku habboon yihiin baahiyahaaga muusikada. Waxaad lahaan kartaa khibrad qulqulaya oo aan hagaagsaneyn oo siman.
Qiima dhimista ardaygu waxay yareynaysaa culeyskaaga bixinta lacagaha qaaliga ah ee bil kasta sidoo kale. Muuqaalka soo dejintu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kaydiso muusig tayo sare leh si fudud. Iyagu ma qaataan meel badan oo keyd ah sidoo kale. Gundhigga qad la'aanta ayaa la heli karaa si loo kaydiyo xogta socodka.
2. 3-bilood tijaabo bilaash ah
Spotify waxay hada siineysaa dhamaan ardayda Mareykanka tijaabo bilaash ah oo 3-bilood ah qorshahan. Biilashaada ugu horeysa waxay imaan doontaa bilo kadib markaad sameyso rukunka.
Waa maalgashi heer sare ah qof kasta oo xiiseynaya. Hase yeeshe, waa ansax haddii aad diyaar u tahay ballanqaad dheer. Isticmaalayaashu waa inay ku sii jiraan qorshahan dhimista ardayga muddo sannad ah. Isticmaalayaasha ma joojin karaan rukunka ka dib tijaabada saddexda bilood ah. Waa heshiis aad u fiican qofkasta oo dhageysta muusig badan. Spotify waxay leedahay maktabadda ugu weyn xilligan.
3. Ku-darista rukummada
Qiimo-dhimista ardaygu waxay la socotaa isku-xidhka Showtime iyo Hulu (ad). Kuwani waa ku darista ugu fiican ee arday kasta.
Waxaad ku raaxeysan kartaa waxyaabaha ugu sarreeya adoo adeegsanaya rukumo jaban. Dhamaanteen waxaan ku qarash gareyneynaa 2020 shaashadaha hortooda. Daawashada barnaamijyo madadaalo leh iyo filimooyinku waxay kuqanacsan yihiin adeegyadan. Ardayda badanaa waxay leeyihiin miisaaniyad hoose laakiin ku bixinta qorshahan waxay umuuqataa mid qiimo leh. Waxaa jira rukhsado badan oo qiimo-kordhin ah qorshahan.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay muuqaalada Spotify premium ay siiso ardaydooda. Waa mid aad ugufiican dheefahaaga.
Adeegyada lacagta lagu bixiyo ee 'Spotify premium' waxaa lagu heli karaa qiimo aad u jaban. Qiima dhimista ardayda ayaa xitaa ka jaban. Kharashku waa $ 4.99 bishiiba ardayda laga dhimo. Waxaan kugula talineynaa inaad iibsato qorshahan oo aad ka faa'iideysato faa'iidooyinka cajiibka ah. Farsamooyinka kale ayaa sidoo kale lagu heli karaa qiimo macquul ah. Qorshayaasha joogtada ahi waxay kugu kici doonaan $ 9.99 bishiiba. Qof kasta oo aan wax ka baran jaamacad wuxuu mar kale tijaabin karaa qorshaha caymiska. Waa ku darid aad u fiican taleefankaaga. Haddii dhageysiga muusiggu yahay hiwaayadda aad ugu jeceshahay, markaa sicirka waa inuusan noqonin qodob.
Ardayda qaarkood waxaa laga yaabaa inay la kulmaan arrimo la xiriira xaqiijinta Spotify-kooda. Waxay ku dhici kartaa xaalado yar oo naadir ah. Haddii websaydhku aanu awood u lahayn inuu la socdo oggolaanshahaaga, markaa xaqiijinta gacanta ayaa ah ikhtiyaar. Isticmaalayaasha ayaa tan ka eegi kara goobaha astaantooda. Waa inaad email u dirtaa Spotify oo wata aqoonsigaaga jaamacadeed. Waxay qaadan doontaa dhowr maalmood, laakiin qiimaha wuxuu noqon doonaa mid aad u macquul ah. Waxaan kuu soo jeedinaynaa ikhtiyaarkan haddii aadan u muuqan karin inaad sameyso xaqiijin otomaatig ah.
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu waxtar badan u lahaa akhristayaashayada. Spotify waa barnaamijka muusikada u taga malaayiin dhagaystayaal ah. Waad tijaabin kartaa maanta oo aad sahamin kartaa adeegga. Abuur liistooyin aad u fiican oo la wadaag asxaabtaada. Waxaa jira tanno sababo ah oo lagu doonayo in lagu bixiyo qiimo jaban. Waxaan rajeyneynaa inaad khibrad weyn u leedahay adeeggan soo deynta heestan.
Sidee Loo Helaa Qiime Dhimista Ardayda Hulu?
15 Websaydhyo Xiiso Leh Oo Xiiso Leh Markasta
Netflix vs Amazon Prime Video - Isbarbardhiga Ultimate
Youtube TV vs Hulu Live - Keebaa Adeeggu Fiican?
Sidee loo tirtiraa Xisaabta Gmail?
Barnaamijka Netflix ee loogu talagalay Mac - Suurtagal ma tahay?
Adeegyada VPN ee ugu Fiican 2020 - Top 10 Kuwa Ugu Amniga Badan
Sidee Loogu Beddelaa Youtube Qaabka Mp3?
Sidee loo hubiyaa Diiwaanada Wadahadalka?
Sidee loo hagaajiyaa Netflix Ma shaqeynayo?
Beddelaadaha Garageband-ka ugu Fiican ee loogu talagalay Android
6 VPN ugu fiican ee loogu talagalay Netflix - Diseembar 2020
21 + Hoos-u-hagaajinta ugufiican ee Aad Raacdo (2020)
sida loo isticmaalo youtube-ka illaa mp3 beddelaha
si bilaash ah uga daawo filimada khadka tooska ah adigoon soo dejisanayn
pluto tv barnaamijka xakamaynta fog
daawado filimada buuxa lenghth online
filimada iyo bandhigyada TVga si aad u daawato
daawato daayo movie cusub free online
Madadaalo Sida Loo Kuuboonada Qalabka Ciyaar Bixinta Dib U Eegid Softwares Barnaamijyada Vpn Og Liisaska Qalabka Bulsho Dib U Eegis
© 2021 | Xuquuqda Daabacaadu Way Xifdisan